चिकित्सकलाई डा केसीले फिर्ता जाने भन्दा उपप्रधानमन्त्री यादवले भने- त्यही बसेर उहाँको परीक्षणमा खटिनुस् – Everest Dainik – News from Nepal
चिकित्सकलाई डा केसीले फिर्ता जाने भन्दा उपप्रधानमन्त्री यादवले भने- त्यही बसेर उहाँको परीक्षणमा खटिनुस्
काठमाडौं, असार २१ । उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादवको निर्देशनमा राजधानीबाट बिहीबार अपरान्ह जुम्ला पुगेको चिकित्सकको टोलीले आमरण अनशनरत प्रा.डा. गोबिन्द केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ ।
डा. जीवन थापा र सुभाष रेग्मीले डा. केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका थिए । उनीहरुका अनुसार अनशनरत डा केसीको स्वास्थ्य ‘अत्तालिनुपर्ने’ अवस्थामा नरहेको जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पुगेको चिकित्सकको टोलीलाई डा केसीले फिर्ता जान आग्रह गरेका थिए । डा केसीले भने, ‘तपाइँहरु मेरो चिन्ता गरेर यहाँसम्म आउनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद । मेरो हेरचाह र उपचार यहीँका मानिसले गर्छन् ।’
डा केसीले फिर्ता जान आग्रह गरेको कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी गराउँदा उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री यादवले त्यहीँ बसेर डा. केसीको स्वास्थ्यबारे निरन्तर निगरानी गर्न निर्देशन भएको स्वास्थ्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव महेश चौरसियाले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्री यादवलाई उद्धृत गर्दै चौरसियाले भने, ‘ डा. केसीले फिर्ता हुन भनेपनि तपाइँहरु त्यही बसेर वहाँको स्वास्थ्य परीक्षणमा खटिनुस् । वहाँको स्वास्थ्य विग्रिन नदिने हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व हो ।’